काभ्रेमा आजबाट निषेधाज्ञा लागू, कुन कुन ठाउँमा ? - Naulo Samachar
काभ्रेमा आजबाट निषेधाज्ञा लागू, कुन कुन ठाउँमा ?
२०७८ बैशाख २०, सोमबार मा प्रकाशित ३२६ पटक पढिएको
बैशाख २०, काभ्रे। काभ्रे जिल्लामा आज (सोमबार) बाट निषेधाज्ञा लागू भएको छ। गएराति (आईतबार) राती १२ बजे देखि निषेधाज्ञा लागू भएको हो। बैशाख २६ गते राती १२ बजेसम्म निषेधाज्ञा लागू रहने जिल्ला प्रशासन कार्यलयले शनिबार नै जनाएको छ।
पछिल्ला दिन जिल्लामा कोरोना संक्रमितको दर उच्च भएसँगै रोकथामको प्रयास स्वरूप निषेधाज्ञा जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलले बताउनुभयो।
१) अरनिको राजमार्गको साँगादेखि बनेपा-धुलिखेल-पाँचखाल हुदै दोलालघाटसम्म सडकको दाँया-बाँया ५ सय मिटर
२) बनेपा तीनदोबाटोदेखि नाला भगवतीसम्म सडकको दाँया-बाँया ५ सय मिटर
३) बनेपा-पनौती-खोपासी सडकको दाँया-बाँया ५ सय मिटर
४) वीपी राजमार्गको धुलिखेल चोकदेखि काभ्रेभञ्ज्याङ–भकुण्डे हुदै मंगलटारसम्म सडकको दाँया–बाँया २ सय मिटर
५) पाँचखालको जिरोकिलो देखि कुन्तावेशीसम्म सडकको दाँया–बाँया २ सय मिटरसम्म
६) ग्वार्को–नमोबुद्ध राजमार्गको मानेदोभान–कुशादेवि–सुन्थान–शंखुपाटीचौर–नमोबुद्ध मन्दीर क्षेत्र दाँयाँ–बाँयाँ २०० मिटर क्षेत्रमा निषेध आदेश जारी गरिएको छ।